“သဘိ-သဘိ မှောက်မှောက်”၊ “သဘိ-သဘိ မှောက်မှောက်”၊ ဆိုတဲ့သံပြိုင်ဟစ်ကြွေးသံတွေနဲ့အတူ ကျွန်တော်အိပ်ယာက နိုးလာခဲ့တာဟာ ၈-၈-၁၉၈၈ မနက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အကြီးဆုံးသားနဲ့ ထားဝယ် သတ္တုတွင်းတည်းခိုရိပ်သာမှာ တည်းခိုနေကြရချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရဆရာဝန် ဖြစ်ကတည်းက အညာဒေသခေါ်တဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်းထဲမှာသာ တောက်လျှောက် တာဝန်ကျနေရာကနေ ထားဝယ်မြို့နယ်၊ ဟိန်းဇဲသတ္တုတွင်းဆရာဝန်အဖြစ်ရွေ့ပြောင်းခံရလို့ တာဝန်ထမ်းနေခဲ့တာ တပါတ်တိတိသာ ရှိပါသေးတယ်။ ထားဝယ်မြို့ထဲ လျှောက်ကြည့်ကြပါတယ်။ လူပေါင်းထောင်ချည်တဲ့ ဆန္ဒပြနေသူတွေထဲ ရောက်သွားလိုက်ကြ၊ ဘေးကနေလိုက်လိုက်ကြ။ ထားဝယ်စကားကို အကုန်နားမလည်ပေမဲ့ ဖြစ်နေတာတွေမှန်သမျှ ဘာသာပြန်စရာမလိုဘဲ သိပါတယ်။ တနေရာမှာတော့ အလှူခံ လူငယ်တယောက်ရဲ့ ခွက်ဖလားထဲကို အကြီးဆုံးပိုက်ဆံစက္ကူတရွက် ထည့်လှူလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့ ရှစ်လေးလုံးအတွေ့အကြုံဆိုတာ ဒီလောက်သာရှိတယ် ပြောရမလားမသိပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်မိသားစု တခုလုံးကိုတော့ ရှစ်လေးလုံးအဖြစ်သနစ်ကြီးကနေ မထင်မှတ်တာတွေ၊ မမျှော်မှန်းတာတွေဟာ တသက်တာအတွက် ဆက်တိုက်ဖြစ်လာစေဘို့ သန္ဓေပေးလိုက်ပါတော့တယ်။
တိုင်းပြည်အခြေအနေတွေက အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲနေလာပါပြီ။ (မဆလ) အစိုးရ ဘယ်လိုမှလုပ်မရတော့ပါ။ ထားဝယ်လူထုကိုကြည့်ပြီး၊ အလုပ်ခွင်ရှိရာ ဟိန်းဇဲသတ္တုတွင်းကို ပြန်မသွားတော့ဘို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းလေးတွေ ဒီအတိုင်းထားခဲ့တယ်။ အစိုးရအလုပ်ဆိုတာလဲ ကမ္မသကာ။ လစာ၊ ပြောင်းရွေ့ခရီးစရိတ်လဲ နောင်ခါလာနောင်ခါဈေး။ ကိုယ်လိုပဲ ရှစ်လေးလုံးကနေ ဘဝကို သွက်သွက်ခါ အပြောင်းခံရသူတွေ ထုနဲ့ဒေးရှိပါတယ်။ ထားဝယ်ကနေ မိသားစုရှိရာ မုံရွာ-ပုလဲပြန်ဘို့ ရန်ကုန်ကို လေယာဉ်စီးပြီးမှ မီးရထားနဲ့ သွားရမယ်။ ထားဝယ်ကနေ လေယာဉ် မထွက်တော့ပါ။ လေဆိပ်ကို ၃-၄ ရက်သွားစောင့်ကြရပါတယ်။ လေယာဉ်ကို လှမ်းမြင်နေရပေမဲ့ အောက်မဆင်းလို့ ပြန်လာရတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ထိုင်ခုံနှစ်နေရာရပါလို့ မြန်မာ့လေကြောင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ရန်ကုန် မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်ကနေ မြို့ထဲသွားဘို့ တက်စီမရှိပြန်ပါ။ ဟိုမေးသည်မေး၊ နောက်ဆုံး ကားကြုံတစီးရပါတယ်။ အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ရှစ်လေးလုံးမှာ ဘယ်သူဘယ်ဝါတွေကနေ ကိုယ့်ကိုကျေးဇူးပြုခဲ့သလဲလို့ မသိနိုင်တာ စိတ်မကောင်းပါ။ စစ်ထောက်လှမ်းရေးက လူမသိအောင်နှိပ်စက်သတ်ဖြတ်တဲ့အချိန်မှာ ရိုးစဉ်းတဲ့လူတွေကလဲ လူမသိအောင် အချင်ချင်းရိုင်းပင်းကူညီကြပါတယ်။
တည်းခိုမဲ့ စမ်းချောင်းရောက်အောင် သစ်ပင်တွေ၊ အတားအဆီးတွေ အများကြီးကို ကျော်လွှားကြရတယ်။ တည်းမဲ့အိမ်က မိတ်ဆွေဖြစ်သူ (မဆလ) မြို့နယ်ကောင်စီက ဗိုလ်မှူးတဦးအိမ်။ တခြားလဲ အဆင်ပြေတာမရှိပါ။ အိမ်ရှေ့ဝရန်တာ ထွက်ပြီး နေရှင်နယ် ဓါတ်ခဲ ၂ လုံးသုံးရေဒီယိုကို လက်ကမချအောင် သတင်းနားထောင်ရတယ်။ BBC နဲ့ AIR က အဲဒီကာလမှာ ပေါ်ပြူလာအဖြစ်ဆုံးပါ။ ရေဒီယိုနားထောင်တာမှန်ပေမဲ့ စစ်ဗိုလ်အိမ်မှာတည်းနေတာမို့ လမ်းပေါ်ကလူတွေက ထောက်လှမ်းရေးလား အထင်မှားကြတာကို သိလာတော့မှ ဆင်ခြင်ရပါတော့တယ်။ ရန်ကုန်-မန္တလေး မီးရထားလဲ မပြေးပါ။ ၄-၅ ရက်စောင့်ရပြီးမှရတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ၁၅ နှစ်တိတိ တာဝန်ထမ်းခဲ့တဲ့ အစိုးရအလုပ်ကို တကယ့်ဖေါင်ဖျက်သလို နောက်ကြောင်းမကြည့်ဘဲ မိသားစုရှိရာ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ပုလဲမြို့ကို ပြန်ရောက်ပါတော့တယ်။ မိသားစုပြန်လည်ပေါင်းဆုံမှုကိုလဲ နောင်မှာတခါထပ်ကြုံရပြန်ပါတယ်။ ဖေါင်ဖျက်ရတာလဲ သည်တခါထဲမဟုတ်တာကို နောက်မှသိရပါတယ်။ မြို့က သေးလေးပေမဲ့ ပုလဲမှာလဲ ရှစ်လေးလုံး လှုတ်ရှားမှုတွေဖြစ်ပါတယ်။ လူဦးရေကနည်းတော့ ဘယ်သူဘယ်ဝါ မသိမရှိကြပါ။ အစိုးရဝန်ထမ်းတွေလဲ လမ်းပေါ်ထွက်အော်တယ်။ ကျွန်တော်က အစိုးရအလုပ်ကို မထွက်ရသေးပါ။ ဆန္ဒပြသူတွေအတွက် ကိုယ့်ဖါကိုယ် ကြက်ခြေနီအဖွဲ့လုပ်ပြီး ကူညီရပါတယ်။ နောက်တက်လာတဲ့ စစ်အစိုးရကနေ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့ကို သူတို့ရဲ့ အရံအင်အားအဖြစ်သာ အသုံးချခဲ့တာကို တွေ့မြင်ရတော့ အတော်စိတ်နာပါတယ်။
စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်ပါပြီ။ NLD ဖွဲ့ပါပြီ။ NLD စီအီးစီ (ကွယ်လွန်သူ) ဆရာမောင်သော်က ပုလဲအထိ ရောက်လာပါတယ်။ ကျွန်တော် အစိုးရဆရာဝန်အလုပ်ကမထွက်ရသေးလို့ သူ့စကားဝိုင်းမှာ မပါနိုင်ခဲ့ပါ။ ဒါပေမဲ့ ပုလဲမှာ NLD ဖွဲ့ဘို့လုပ်ကြတော့ ကျွန်တော့်အိမ်က လူမသိစေတဲ့ဌာနချုပ်ဖြစ်လာပါတယ်။ အစိုးရဝန်ထမ်းမှန်သမျှ အရင်က (မဆလ) ထဲမဝင်ရင် ရာထူးမတိုး၊ ပစားမပေးခဲ့ရာကနေ ရှစ်လေးလုံးတန်ခိုးနဲ့ နိုင်ငံရေး မလုပ်ရဖြစ်လာပါတယ်။ (မဆလ) ကံမကောင်းပေမဲ့ ကျွန်တော်ကံကောင်းပါတယ်။ နိုင်ငံရေးလုပ်ချင်ရင် အစိုးရ အလုပ်ကနေ ထွက်ပါတဲ့။ အဲဒီခေတ်မှာက ဆရာဝန်အလုပ်ရဘို့ထက် ထွက်ဘို့ကပိုခက်ပါတယ်။ ရန်ကုန်ကိုဆင်းပါတယ်။ ကျန်းမာရေးဦးစီး ညွှန်ချုပ်ရုံးသွား အလုပ်ထွက်စာတင်ပါတယ်။ တပါတ်သာကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ထွက်ခွင့်ရပါတော့တယ်။ ဒီအတွက်တော့ကျေးဇူးပါ စစ်အစိုးရခင်ဗျား။ ရှစ်လေးလုံး အရေးအခင်းကြီးကနေ NLD ကို ဖွဲ့စည်းစေဘို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာ အမှန်ပါ။ ရှစ်လေးလုံးအရေးအခင်းနဲ့ NLD မှာ ဆင်တူတာတွေရှိပါတယ်။ လူပေါင်းစုံပါတယ်။ ပညာအခြေခံအမျိုးမျိုး၊ ပရိဒေသနအမျိုးမျိုး၊ အတွေးအမြင်အမျိုးမျိုး၊ လိုအင်ဆန္ဒအမျိုးမျိုး၊ စုဝေးတဲ့နေရာအတူတူဖြစ်တယ်။ ၂၅ နှစ်အကြမှာအထိ သံမှိုနှက်ထားသလို ဆက်ပြီး မြဲခိုင်နေသူတွေ ရှိသလို၊ ဘဝအမျိုးမျိုးကို ဖြတ်ကျော်ပြီးသကာလ ရောက်ရာကနေ ဆက်ပြီးသံယောဇဉ်းကြီးနေသူတွေလဲ ရှိတယ်။ ဖါသိဖါသာသမားတွေလဲ မရှားဘူး။ အချိန်ကာလဒဏ်၊ နိုင်ငံရေးဒဏ်တွေ ထုထောင်းခံရလို့ ကျေမွသွားသူတွေ၊ ပန်းပဲဖိုမှာ မီးထဲကဆယ်ပြီး ပေပေါ်မှာထုရိုက်ထားလို့ သံကောင်းကောင်းတွေဖြစ်လာသူတွေလဲ မရှားပါ။ သေခွဲခွဲကြရသူတွေ အများကြီးရှိနေပါပြီ။ NLD မှာ မျိုးဆက်သစ်ဆိုသူတွေ မနည်းမနောရှိလာပါပြီ။ ရှစ်လေးလုံးမှာတော့ အသစ်ဆိုတာမရှိပါ။ အဟောင်းသည်သာ အမာခံဖြစ်တယ်။ သမိုင်းရေးသူတွေ ဖြစ်ကြတယ်။ သမိုင်းကောင်းအမွေ ဆက်လက်ပေးနိုင်ကြပါစေ။
သတင်းစာထဲပါလို့ပါ။ ရေအနက် ၂ ပေခွဲတဲ့။ နောင်လာ နောက်သားတွေအတွက် စိတ်မကောင်းစရာ၊
ဝိုင်းဝန်းကြဖို့ လိုနေပြီ။ (Aung Kyaw Than GoldSmith)
Political fund in India အိန္ဒိယမှာ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ ရံပုံငွေ ဘယ်ကနေရနေသလဲ
• နိုင်ငံရေးပါတီကြီး ၂ ခုဖြစ်တဲ့ ကွန်ဂရက်နဲ့ ဘီဂျေပီပါတီတွေကို နှိုင်းယှဉ်ပြောပါမယ်။
• Congress မှာ Motilal Vora မိုတီလာလ် ဗိုရာ နဲ့ Bharatiya Janata Party မှာ Ramdas Agarwal ရမ်းဒတ်စ် အဂါဝေါလ် တို့ဟာ ဆိုင်ရာပါတီရဲ့ ငွေကြေးကိစ္စမှာ နာမည်ကြီးကြပါတယ်။
• အိန္ဒိယရဲ့ ထိပ်တန်းကော်ပိုရိတ်ကြီးတွေက ၉ဝ% ဟာ နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေကြတယ်။ ထုတ်လဲ မပြောကြပါ။
• ၂ဝ၁၄ မတ်လ (၂၄) ရက်ကရေးတဲ့ သတင်းဆောင်းပါးထဲမှာ ဗိုရာ ကနေ ထိပ်ဆုံးက စက်မှုလုပ်ငန်းကြီးတွေ ၂၅ ခုကနေ လာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ရံပုံငွေတောင်းတယ်လို့ ရေးထားပါတယ်။
• ဘယ်လောက်ရကြသလဲ ခန့်မှန်းကြသူတွေမှာ အတော်ခက်ပါသတဲ့။ များတော့ အများကြီးလို့သာ ပြောနိုင်တယ်။ ဒါဟာ နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ လျို့ဝှက်ချက်တခုပါ။
• ဒီလိုနိုင်ငံရေးရံပုံငွေတွေကို စည်းမျဉ်းထားဘို့အတွက် စက်မှုအသင်းတွေနဲ့ စီးပွါးရေးအဖွဲ့အစည်းတွေက ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိဘို့ တောင်းဆိုတာလဲရှိပါတယ်။
• Confederation of Indian Industry ကနေ နိုင်ငံရေးပါတီတွေအတွက် ရံပုံငွေကို အဖွဲ့ဝင်ပေါင်း ၄၈ဝဝ ဆီကနေ ချက်လက်မှတ်နဲ့သာ ကောက်ခံယူပါတယ်။ ဒါဟာ ပွင့်လင်းပါဘဲလို့ ထုချေပါတယ်။
• BJP ဘဏ္ဍာရေးမှူး အဂါဝေါလ် က သူ့ပါတီရသမျှ ရံပုံငွေကို ခြူးတပြားမကျန် စာရင်းစစ်ဆေးမှု လုပ်ပါသတဲ့။
• အိန္ဒိယယရဲ့ အကြီးဆုံးစက်မှုလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့ Tata group တာတာအုပ်စုကနေ သူ့ရဲ့ Electoral Trust ရွေးကောက်ပွဲ ဂေါပကအဖွဲ့ကို ၁၉၉၉ မှာထူထောင်ထားပါတယ်။ အဲဒီ ၁၉၉၉ မှာ စုစုပေါင်း ရူးပီး ၁ဝ သန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ် ၂ဝ၁၄ မှာ ဒိထက်အတော်များမယ်လို့လဲ ဆိုပါတယ်။
• Tata companies ကုမ္ပဏီတွေကနေ ဂေါပကအဖွဲ့မှာ ရံပုံငွေထည့်ဝင်ကြရပါတယ်။ အကြီးတန်း တရားရုံးချုပ်ရှေ့နေ Dinesh Vyas ဒင်းနစ်ရှ် ဗီယပ်စ် ကနေ ဂေါပကကို ဦးဆောင်ပါတယ်။
• Tatas ကနေရှင်းလင်းတာက ဒီလိုဂေါပကထားတာဟာ ပွင့်လင်းမှုရှိပြီး ခွဲခြားမှုလဲ ကင်းစေမယ်၊ ကျန်နေစရာလဲမရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
• အစိုးရအနေနဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင် အဆိုပြုချက် ၃ ခုတင်ပါသေးတယ်။
1. ဥပဒေတခုပြုမယ်။ ရွေးကောက်ပွဲအတွက်နဲ့ ကြားကာလတွေမှာ ပါတီရံပုံငွေတွေကို ခွဲဝေမှုနဲ့ သုံးစွဲမှုအတွက်ဖြစ်မယ်။
2. ပုံမှန်အကောင့်တွေ ထားမယ်။ ပါတီတိုင်းမှာ စာရင်းစစ်ပြီး အကောင့်တွေကို စစ်ဆေးဘို့ရှိနေရမယ်။
3. အစိုးရကနေ ရံပုံငွေထောက်ပံ့ပေးမယ်။
၂ဝဝ၁ ဇန္နဝါရီလမှာ ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနကနေ အကြောင်းကြားချက်တခု ထုတ်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ ပြုပြင်ရေး အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအရထည့်ဝင်ငွေတွေကို စည်းမျဉ်းထားဘို့ဖြစ်တယ်။ အစိုးရကိုတောင်းဆိုထားတာက အကောင့်တွေကို စစ်ဆေးပါ။ လူသိရှင်ကြား ထုတ်ပြန်ပါ။ မမှန်ကန်လုပ်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကို ပယ်ဖျက်ပါ။ တသီးပုဂ္ဂလ ဖြစ်ဖြစ် ကော်ပိုရိတ်တွေဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံရေးရံပုံငွေထည့်နိုင်တယ်။ အများဆုံး သတ်မှတ်ချက်ထားမယ်။ အမြတ်အစွန်းရဲ့ ၅% ထက်မများစေရ။ အဲဒိအတွက် အခွန်လျှောပေါ့ပေးမယ်။ ကော်ပိုရိတ်တွေကိုလဲ ဂေါပကတွေ ထူထောင်ဘို့ အစိုးရကနေ အားပေးဘို့လဲ အကြံပြုတယ်။ ဒီအဆိုပြုချက်ဟာ အစိုးရရုံးထဲက ထွက်မလာပါ။
လွန်ခဲတဲ့နှစ်အနည်းငယ်တုံးက စီးပွါးရေးပညာရှင် Pai Panandikar ပိုင် ပန်နန်ဒီကာ နဲ့ Ramashray Roy ရမ်မက်ရ်ှရေ ရွိုင်း တို့ကနေ အဆိုပြုချက် ထွက်ခဲ့ပါသေးတယ်။
2. အစိုးရကနေ တနိုင်ငံလုံးမှာ တမဲ ရူးပီး ၁ဝ နှုန်းနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲရံပုံငွေ ထူထောင်ရန်။
3. အထူးရံပုံငွေအေဂျင်စီတရပ်ကနေ ဒါမှမဟုတ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေ ရံပုံငွေ ကိုင်ရန်။
4. ရွေးကောက်ပွဲမှာ အမတ်လောင်ရတဲ့ မဲအရေအတွက်နဲ့အညီ ငွေထုတ်ပေးရန်။ မဲဆန္ဒနယ်မြေတခုမှာ အများဆုံး ရူးပီး ၁ဝ သိန်း။
5. ငွေကို အမတ်ကိုသာပေးမှာဖြစ်ပြီး သူ့ပါတီကိုမပေးရန်။
6. အရင်ကလုပ်ဆောင်နိုင်မှုကိုကြည့်ပြီး ၅ဝ% ကြိုတင်ထုတ်ပေးရန်။
7. တဦးချင်းရဲ့ အသေစိတ် အကောင့်ကို ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေ စစ်ဆေးရန်။
ဒါကိုလဲဘဲ ဆွေးနွေးငြင်းခုန်မှုတွေ မရှိသလောက်ပါ။ ရလဒ်ကတော့ အလှူရှင်နဲ့အလှူခံကြား လှို့ဝှက်ထားရေးသာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခု ၂ဝ၁၄ မှာ အပြတ်နိုင်လိုက်တဲ့ ဘီဂျေပီပါတီဟာ ငွေမဲတွေကိုသုံးတယ်လို့ ၂၁-၂-၂ဝ၁၄ နေ့က ပီတီအိုင် သတင်း တခုက ဆိုထားပါတယ်။ ဒီစွပ်စွဲချက်ကို ကျောက်မီးသွေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Sriprakash Jaiswal ရှရီ ပရာက်ရှ် ဂျေစ်ဝေါလ် ကနေ ဘီဂျေပီပါတီဟာ ကုဋ္ဋေ ၄ဝဝဝ ကိုငွေမဲကနေ ရတယ်လို့ ပြောခဲ့တာပါ။
ဒါတွေကတော့ အိန္ဒိယမှာလုပ်နေကြတာတွေပါ။ သိထားဘို့သာဖြစ်ပြီး အတုမခိုးသင့်ဘူးလို့ မြင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ‘ဒီဘိတ်’ စသင့်နေပါပြီ။ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဆီကနေ အသံစထွက်လာပါပြီ။ ခက်တာက သူတို့ပါးစပ်က ထွက်တာမှန်သမျှ လူထုက မယုံကြပါ။
ည ၁၁ နာရီ၊ ၃၇ မိနစ်။
မြန်မာ့အရေးမှာ နိုင်ငံတကာကသုံးသပ်သူတွေနဲ့ မြန်မာပြည်သားတွေရဲ့ ကနေ့ပစက္ခ အပြောင်းအလဲတွေအပေါ် ဆန်းစစ်တာ ကောက်ချက်ချတာတွေက တချို့နေရာတွေမှာ မတူကြပါ။ နိုင်ငံတကာဆိုတာက ကျယ်ပြန့်လို သူတို့ကြားမှာလဲ ကွဲပြားတယ်။ အကျိုးစီးပွါးလဲ ခြားနားလို့ပါ။ မြန်မာနိုင်သား နည်းနည်းလေးအထဲမှာ ကွဲလွဲတာက ရိုးရှင်းတယ်။ အဟောင်းသမားတွေက အဟောင်းကို ချီမွမ်းတသကြတယ်။ အသစ်ဖြစ်ချင်သူတွေက အားမရကြပါ။ သည်ကြားထဲမှာ မဟောင်း-မသစ်တွေက အားလိုအားရ အုပ်စိုးသူဘက်က လိုက်ပါကြတယ်။ ခေတ်တိုင်းမှာ ရှိတတ်တာပါ။ ‘သခင်အားရ’ လို့အထိ ကလိရင် ခံချင်ပါ့မလားမမေးနဲ့။ ပြုံးရယ်မပျက်၊ အရှက်ဖက်နဲ့ ထုပ်ထားပြီးသူတွေ ဖြစ်တယ်။
အပြောင်းအလဲတွေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတော့ သဘောမကွဲလွဲကြပါ။ အရင်သုံးနှစ်ကဆိုရင် ဒါမျိုး အပြောင်းအလဲတွေကို မျှော်လင့်လို့မရခဲ့၊ ကြိုတွက်လို့လည်း မရခဲ့ပါ။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိစ္စ၊ အထိန်းသိမ်းခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိစ္စ၊ ကလေးစစ်သားနဲ့ ကလေးအလုပ်သမားအပါအဝင် လူ့အခွင့်အရေး ဖောက်ဖျက်မှုတွေလို အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာ အလှည့်အပြောင်းတွေ ကြုံခဲ့ပါပြီ။ ဖွဲ့စည်း အုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုတာပေါ်လာပြီ။ ရေးကောက်ပွဲတွေလည်း လုပ်တယ်။ ဒုတိယကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲက နီးလာပြီ။ ဒုတိယအထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကြီး ကလဲ ပြက္ခဒိန်တခါထုတ်သာ လိုပါတော့တယ်။
နိုင်ငံခြားသားတွေကို ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြတ်ပြတ်သားသား အလေးပေးပြောရပါတယ်။ ဗမာပြည်က အလားအလာကောင်းတွေကို မျှော်ကြည့်ချင်တယ် ဆိုရင်ဖြင့်၊ ကျော်လွန်ပြီး မျှော်လင့်လို့ မရနိုင်တဲ့ အကန့်အသတ်တွေကို သိကြမှဖြစ်မယ်လို့ စေတနာစကားလဲ ပါးလေ့ရှိပါတယ်။ လွတ်လပ်ရေးရကတည်းက ဗမာ့နိုင်ငံရေးမှာ ထိပ်ကခေါင်းဆောင်တွေကသာ အခရာကိစ္စတွေကိုကိုင်ထားပြီး၊ တခြားနိုင်ငံအများအပြားမှာလို နိုင်ငံရေး ပါတီတွေက အဆုံးအဖြတ်ပေးပိုင်ခွင့် မရှိရှာကြပါဘူး။ ဦးနု၊ ဦးနေဝင်း၊ ဦးသန်းရွှေတို့ပြီးရင် ဦးသိန်းစိန်က ‘အကြီးအကဲ’ ဖြစ်သင့်တာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒါလုံးဝမှန်တယ်လို့ မပြောနိုင်ပါဘူး။ သမ္မတအပြင် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရယ်၊ ထိပ်ဆုံးမှာက အငြိမ်းစားရထားပြီးဆိုသူလဲ ရှိသေးတယ်။ သူတို့အားလုံးရဲ့ အပြင်စည်းဟာ လက်ရှိအခြေခံဥပဒေဖြစ်ပါတယ်။
အားမနာတမ်းမေးရတဲ့ မေးခွန်းတခုကတော့ ကုလသမဂ္ဂနဲ့ နိုင်ငံတချို့ကနေ နိုင်ငံသားဖြစ်မှု ဥပ&